coronavirus အကျပ်အတည်းကြောင့်ဒီ quarantine အတွက်အသုံးဝင်မည့်အခမဲ့ Google သင်တန်းများ
အကယ်စင်စစ်ယခု, သာ 48 နာရီ quarantine ကတည်းကလွန်ပြီ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်ပြည်နယ်တစ်လျှောက်မှာကြေညာခဲ့တဲ့ Alert ပြည်နယ်ကိုရောက်စေခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ဆံပင်တွေကိုဆွဲပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတာသေချာတယ်။ မင်းဘာကိုသုံးရမှန်းတောင်မသိဘဲ၊ မင်းရဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လောက်သုံးရလဲဆိုတာမသိဘဲအာရုံကြောထဲရောက်နေတယ်.
အိပ်ရာပေါ်လဲလျောင်းနေခြင်း၊ မိန်းမနှင့်ငြင်းခုံခြင်းသို့မဟုတ် Netflix စီးရီးကိုစားသုံးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်သာမန်အခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုပင်ဆွဲဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်လေ့လာရန်နှင့်ထွက်ရန်ဤအချိန်အားလုံးကို အသုံးပြု၍ အားဖြည့်ခြင်း၊ အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအတွက်မင်းကိုဆက်တိုက်ဆောင်ခဲ့ ဦး မည် ဂူဂဲလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းတဲ့အခမဲ့သင်တန်းများ နှင့်အနည်းဆုံးအလွန်ပျော်စရာငါ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်တဲ့မျှမျှတတကျယ်ပြန့်အစီအစဉ်နှင့်အတူအိမ်မှသင်ယူနိုင်သည့်အတူ။
ပျင်းစရာမလိုဘဲဒီ quarantine ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲ၊ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲ (Post Compilation)
ဤတွင်သင် sign up လုပ်ရန်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်များဖြစ်သည် ဂူဂဲလ်မှသင်ကြားပေးသောအခမဲ့သင်တန်းများ။ သင်၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းချိုးဖောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်သင်နှင့်အလွန်စိတ်အားထက်သန်သောဤဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရရန်အခမဲ့အကွာအဝေးသင်တန်းများသင်ကြားနိုင်သည်။
1 ၃၃ သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်အခမဲ့သင်တန်းများ
3 တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါ ၀ င်သောဂူဂဲလ်သင်တန်း ၉ ခု
၃၃ သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်အခမဲ့သင်တန်းများ
စုစုပေါင်းဂူးဂဲလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုရနိုင်ပါတယ် အခမဲ့သင်တန်း ၃၃ ခု၊ ၉ ခုတွင်တရားဝင်လက်မှတ်ရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင်ရှိနေခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောနှစ်သိမ့်မှုမှအခမဲ့သင်တန်းများ၊ ဤကိစ္စတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသောအားနည်းသောလူများနှင့်အားနည်းနေသောဤလူအများစုအတွက်တစ်ချိန်ကရပ်တန့်ရန်အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအကဲများ။
အဆိုပါသင်တန်းများကိုမတူညီသောပညာရေးစင်တာများနှင့် တွဲဖက်၍ ဂူဂဲလ်မှသင်ကြားသည် ဥပမာအားဖြင့် - ငါစာရင်းပြုစုတော့မည့်
Santa Maria la ရီးရဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်း
Universidad Complutense က de မက်ဒရစ်
အောက်မှာချန်ထားခဲ့တဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှာ အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်အမျိုးအစားသင်တန်း, ကြာချိန်, လက်မှတ်, အခက်အခဲသို့မဟုတ်သင်တန်း၏ပံ့ပိုးပေးသဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်, ဒီအတင်းအကျပ်အဆိပ်သင့်စေခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ခုရရန်ဂူဂဲလ်မှပေးထားသောအခမဲ့သင်တန်းများ.
ဂူဂဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် ဤကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားသုံးခုတွင်ပါဝင်သောသင်တန်း ၃၃ ခု:
တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးအစားကျွန်တော်တို့ကိုကွဲပြားခြားနားပေးထားပါတယ် ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်များအတွက်သင်တန်းများ အဆင်ပြေစွာသင်ခန်းစာမစခင်၊ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည့် module အရေအတွက်နှင့်၎င်းကိုပြီးစီးရန်လိုအပ်သည့်နာရီများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည့် modules များအဖြစ်ခွဲထုတ်သည်။
တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါ ၀ င်သောဂူဂဲလ်သင်တန်း ၉ ခု
သူတို့အားအတွင်း အခမဲ့သင်တန်း ၃၃ ခု Coronovirus ကြောင့်အိမ်မှာအကျဉ်းချခံနေရစဉ်အတန်ကြာအားဖြင့်နာရီ ၄၀ ထက်မကသောသင်တန်းများသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးစီးရန်အချိန်ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ နောက်တစ်ခါသင့်ကိုထားခဲ့ပါ
ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်အခြေခံသင်တန်း။ module 26, ကြာချိန်: 40 နာရီ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ပါ။
Cloud Computing သင်တန်း: သင်ကြားမှုနာရီအပိုင်း ၇၊ ၄၀ ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းကိုဝင်ရောက်ပါ.
အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသင်တန်း: သင်ကြားပို့ချချိန်နာရီ ၈ ပိုင်းသင်ခန်းစာ ၄၀ ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းကိုဝင်ရောက်ပါ။
ပညာရှင်များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း။7module တွေ 40 သင်ကြားမှုနာရီ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းကိုဝင်ရောက်ပါ.
မိုဘိုင်း Apps ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်း။ သင်ကြားချိန်နာရီ ၈။ အပိုင်း ၄၀ ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းကိုဝင်ရောက်ပါ.
Web Development သင်တန်းမိတ်ဆက် - HTML နှင့် CSS (၁/၂)။5module တွေ 40 သင်ကြားမှုနာရီ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းကိုဝင်ရောက်ပါ။
Web Development သင်တန်းမိတ်ဆက် - HTML နှင့် CSS (၁/၂)။4module တွေ 40 သင်ကြားမှုနာရီ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းကိုဝင်ရောက်ပါ။
အလုပ်အကိုင်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းသင်တန်း။4module တွေ 40 သင်ကြားမှုနာရီ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းကိုဝင်ရောက်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသင်တန်း။ 8 module တွေ 40 သင်ကြားမှုနာရီ။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းကိုဝင်ရောက်ပါ.
ဒီ post ရဲ့အစမှာပြောတဲ့အတိုင်း၊ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (၉) ခုအပြင်သင်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာများစွာကိုရှာတွေ့နိူင်ပါတယ်။ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မပါရင်တောင်သင်တိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သေချာပါတယ်။ သင်အလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သောအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်၏ဗဟုသုတ
သင်ဤ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးအစားစာရင်းများအားဖြင့်သင်ခန်းစာများ၏စာရင်းတစ်ခုလုံးကိုရယူနိုင်သည်. ၎င်းတို့အားလုံးသည်ဂူဂဲလ်မှအခမဲ့သင်တန်းများဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » coronavirus အကျပ်အတည်းကြောင့်ဒီ quarantine အတွက်အသုံးဝင်မည့်အခမဲ့ Google သင်တန်းများ
Jose Alfredo Cruz de la Vega ဟုသူကပြောသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါမတည်ငြိမ်သောစီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့်အတူလူတို့အားရရှိနိုင်အောင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဤသူသည်ငါ့ကိုဆက်လက်ဆန္ဒပြင်းပြစေသည်။ များသောအားဖြင့်လခစားပြီးနှစ်ပတ်မှလွတ်မြောက်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောသူများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုပြီးမြောက်ရန်ပင်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုကိုယ်စားပြုသောအချို့သောသင်တန်းများသို့မဟုတ်အတန်းများနှင့်ဆက်မသွားရန်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသင်တန်းသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကြိုးစားရန်။ အသိပေးချက်မှာငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုရောက်တဲ့အခွင့်အလမ်းရလို့ငါကံကောင်းတယ်။ ၎င်းသည်ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးကျွန်ုပ်အားကမ်းလှမ်းသောစီမံကိန်းကဲ့သို့သောစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်ရန်အလွန်တောင့်တသောစိတ်ဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ၎င်းတွင်၎င်းသည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါ ၀ င်သည်။ သင်ယူရန်၊ နားလည်ရန်၊ လေ့ကျင့်ရန်နှင့်ကျေးဇူးတင်ရန်လုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများပင်။ ငါသင်တန်းများသတိပြုမိသော HR ကြောင့်, ငါဒီအချိန်မှာစတင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါအနည်းဆုံးငါသတင်းအချက်အလက်ဖမ်းယူဖို့စတင်ရန် tutorial အစည်းအဝေးများနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလုပ်! တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
José Alfredo Cruz de la Vega ကိုပြန်ပြောပါ
ဤသင်ယူမှုဖြစ်နိုင်ခြေများကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်များစွာသင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချိန်ကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Carlos Lopez ကိုပြန်သွားပါ
ငါတို့ကိုဒီအဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်တွေယူလာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအဲ့ဒီတည်ရှိနေတာကိုမသိခဲ့ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။
စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့် Android Go smartphone သစ် Nokia C2
Red and Blue သည်အခြားတီထွင်ဆန်းသစ်သောအယူအဆတစ်ခုဖြင့် RPG ကဒ်အသစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်